बेहुला लिन बेहुली जन्तीसहित घोडा लिएर पुगेपछि…. « Sansar News
२ पुष २०७८, शुक्रबार १२:५९
काठमाडाैं । के तपाईंले कहिल्यै दुलहीलाई घोडा चढेर बेहुला लिन गएको देख्नुभएको छ ? तपाईंले देख्नु वा सुन्नु भएको होला, तर हालै बिहारमा यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ, जुन भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चर्चामा छ ।
हामी तपाईलाई एउटा यस्तो जुलुस देखाउँदै छौँ जसमा घोडीमा सवार बेहुली बेहुलालाई लिन बेहुलाको ढोकामा पुगे, त्यो पनि जुलुससँगै । बिहारको गया सहरमा भएको यस्तो अनौठो विवाहको चर्चा भारतभर छ । मंगलबार साँझ सहरमा जुलुस निस्कँदा मानिसहरु छक्क परेका थिए ।
वास्तवमा गया शहरको चन्दचौडा निवासी दुल्हनिया अनुष्का गुहाको विवाह पश्चिम बंगालको कोलकाता निवासी जीत मुखर्जीसँग भएको थियो । दुल्हनिया इन्डिगो एयरलाइन्समा एयर होस्टेसका रूपमा कार्यरत छिन् । उनीहरुको बिहेलाई भव्य बनाउन धेरै तयारी गरिएको थियो । जे बाँकी थियो बेहुलीले बनाइन ।
अनौठो जन्तीको बारेमा प्रश्न सोध्दा बेहुलीले आज पनि केटा र केटीमा भेदभाव हुने भएकाले केटीहरुलाई केटाको बराबरीमा ल्याउन यस्तो अभियानको आवश्यकता रहेको बताइन् । केटा र केटीको भेदभाव हटाउन बेहुलालाई घोडामा सवार ल्याउदै छु । अनुष्का गुहाले भनिन् कि म अन्य केटीहरूलाई पनि आफ्नो दुलहा आफैं लिन जान भन्छु।
अनुष्कासँग विवाह गरेका दुलहा जीत मुखर्जीले पनि यस्तो कामले समाजमा राम्रो सन्देश जाने बताए । केटी घरमा मात्रै बस्ने र घरायसी काममा मात्र सिमित रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । एजेन्सीबाट
मानिसका लागि चुनौती बन्दै रोर्बट, १० हजार मजदुरको…
कतै तपाई पनि यस्ता सपना त देख्नु भएको…
कम्बल ओढेर प्लेनकै सिटमा सेक्स गरेपछि…
सुगा हराएपछि डाक्टरकी श्रीमतीले खाना खान छोडिन्, लाखौं…
एउटा खरबुजाका लागि भएको त्यो युद्ध, जहाँ मारिएका…